Ifowuni yethutyana kunye neLahliweyo ▷ Fumana i-sms kwi-intanethi inombolo entsha · Inombolo entsha yongezwe kwimizuzu eyi-10 eyadlulayo · ONLINE-SMS.ORG · 10 min number
Fumana iSMS kwi-intanethi kwinombolo entsha yethutyana yefowuni simahla
Iyafumaneka 90 amanani. Inombolo entsha yongezwa 31 ingqalelo ago.
Onke amazwe (90) eunited States (20) Khanada (12) Izikumkani Ezimanyene (10) Fransi (3) Rhashiya (3) elamaDatshi (2) Swiden (2) Pholend (1) Filipayinzi (1) Estoniya (1) Lathviya (1) Ostriya (1) Speyin (1) Mekhsikho (1) Ostreliya (1) Mali (1) Kazakhstan (1) Morokho (1) Finlend (1) Photshugo (1) Yukreyini (1) Kholambiya (1) Dominikha (1) Thekhi (1) Nayijeriya (1) Yuganda (1) Gana (1) Maleyishiya (1) Nyu Zilend (1) EMyanmar (eBurma) (1) Indoneshiya (1) Ayalend (1) Brazil (1) Bheljiyam (1) Moldova (1) Jemani (1) Indiya (1) eTshayina (1) El Salvado (1) Sirayeli (1) Lithuwaniya (1) ElamaTaliyane (1) Hong Kong SAR China (1) Romaniya (1) Umphakathi waseCzech (1)
5011 2 ingqalelo ago
67044 2 ingqalelo ago
16570 2 ingqalelo ago
53350 2 ingqalelo ago
56208 4 ingqalelo ago
135925 4 ingqalelo ago
59800 5 ingqalelo ago
49432 5 ingqalelo ago
23120 5 ingqalelo ago
729 6 ingqalelo ago
629 6 ingqalelo ago
1074 6 ingqalelo ago
61 7 ingqalelo ago
66 7 ingqalelo ago
67 7 ingqalelo ago
46 7 ingqalelo ago
80141 7 ingqalelo ago
244 8 ingqalelo ago
319 10 ingqalelo ago
574 10 ingqalelo ago
36247 4 ingqalelo ago
43625 4 ingqalelo ago
124951 4 ingqalelo ago
432 4 ingqalelo ago
688 5 ingqalelo ago
1015 5 ingqalelo ago
414 6 ingqalelo ago
400 6 ingqalelo ago
443 6 ingqalelo ago
610 6 ingqalelo ago
45646 7 ingqalelo ago
1276 9 ingqalelo ago
56693 2 ingqalelo ago
1324 3 ingqalelo ago
65592 3 ingqalelo ago
77098 4 ingqalelo ago
115069 4 ingqalelo ago
819 5 ingqalelo ago
1138 5 ingqalelo ago
667 6 ingqalelo ago
13481 8 ingqalelo ago
27288 8 ingqalelo ago
2315 3 ingqalelo ago
1468 3 ingqalelo ago
2351 3 ingqalelo ago
2729 2 ingqalelo ago
3638 4 ingqalelo ago
4520 4 ingqalelo ago
175 4 ingqalelo ago
300 5 ingqalelo ago
16969 2 ingqalelo ago
969 3 ingqalelo ago
3048 14 ingqalelo ago
554 12 ingqalelo ago
6611 11 ingqalelo ago
7008 9 ingqalelo ago
21085 9 ingqalelo ago
9037 6 ingqalelo ago
3114 1 inyanga ago
88076 4 ingqalelo ago
520 20 ingqalelo ago
1097 2 ingqalelo ago
506 2 ingqalelo ago
7575 2 ingqalelo ago
7730 2 ingqalelo ago
2091 2 ingqalelo ago
1490 17 ingqalelo ago
1957 24 ingqalelo ago
1023 1 inyanga ago
10724 3 veki ago
405 1 inyanga ago
488 1 inyanga ago
8533 1 inyanga ago
9303 1 inyanga ago
11063 1 inyanga ago
667 4 veki ago
11178 3 veki ago
8811 3 veki ago
758 3 veki ago
377 24 ingqalelo ago
7563 2 veki ago
5336 2 veki ago
5 1 veki ago
597 1 veki ago
661 5 imini ago
1846 5 imini ago
11532 4 imini ago
274 41 ingqalelo ago
223 32 ingqalelo ago
1269 2 ingqalelo ago
Fumana inombolo yefowuni yethutyana ukufumana i-sms kwi-intanethi ngaphandle kokubhalisa
I-Online-sms.org ibonelela ngokufumana i-sms simahla kwiinombolo zefowuni ezilahlwayo kunye nezexeshana kwi-intanethi. Unokusebenzisa iiselfowuni zethu simahla ngaphandle kokuhlawula i-sms engenayo okanye ukubhalisa iakhawunti. Bhalisa ii-akhawunti ezintsha usebenzisa iinombolo zethu zethutyana. Fumana ikhowudi yokuqinisekisa yeSMS simahla kwiiapps ezingaphezulu kwama-300 kunye neendawo ezinje ngeWhatsApp, Google, Facebook, WeChat, Telegraph, Viber, Line, KakaoTalk, Gmail kunye nokunye. Ukuba ucinga ukuba kulungile, nceda wabelane ngesayithi yethu yolwamkelo lweSMS nabahlobo bakho.
Yintoni inombolo yefowuni ebonakalayo? Endaweni yeSIM khadi ebonakalayo, inani liyafumaneka efini. Ke ungafumana iSMS kwi-Intanethi naphi na emhlabeni ngaphandle kobunzima bokuzulazula. Ukufumana i-sms kwinombolo yomgunyathi kufuneka nje ulinde imizuzu eyi-1-10, isantya sokufumana i-sms sixhomekeke kumthumeli. Sihlaziya uluhlu lwamanani eselula yonke imihla. Zonke iinombolo zethu kufuneka zithathwe njengenombolo yokulahla okanye yesikhashana yokufumana i-sms kuba inani le-sms yamahhala ngokwayo lithetha ukuba abantu abaninzi banokuyisebenzisa kanye, kwaye ayigcinwa kwaye emva kokuyeka ukufumana i-sms. Inombolo iya kwimo ethi "offline" kwaye uye kumanani angasebenziyo. ukubuyisela ukwamkelwa kwe-sms akunakwenzeka. Ngoko musa ukuzisebenzisa ukubhalisa iiakhawunti ezibalulekileyo.
Ke, kufuneka wamkele i-sms ukuze uqinisekise iakhawunti yakho nge-sms ukwenza njalo:
➊ Khetha ilizwe lenombolo kumazwe akhoyo angasentla
➋ Khetha inombolo yefowuni yasimahla kwaye uyichaze kwiwebhusayithi eyifunayo
➌ Cofa kumanani kwaye uya kuya kwi-inbhoks yenombolo ekhethiweyo.
Ungafumana imiyalezo emininzi njengoko ufuna kuzo zonke iisayithi ngaphandle kwentlawulo kunye neenkqubo zebhanki.
Yiyiphi i-text reception ekhoyo
Ulwamkelo lwe-sms lwasimahla luyafumaneka kumanani ethutyana e-US, eTshayina, eNgilani, eJamani, e-Australia, e-Indonesia, eKorea, eMorocco, eMelika, eAlbania, eMalaysia, eIndiya, eTurkey, eSweden, eRashiya. Inani lamanani akhoyo kwilizwe ngalinye unokubonwa ngokucofa igama lelizwe.
Qaphela: Awudingi ukuhlaziya iphepha. Yonke imiyalezo ifika ngoko nangoko xa ikwiseva yethu.
Ithini inombolo yethutyana okanye enokulahlwa?
90 Inombolo yefowuni elahlayo iyaziwa ngokusemthethweni njengenombolo yefowuni yesikhashana, oku kuthetha ukuba amanani afumaneka kwixesha elilinganiselweyo, ukusuka kwimizuzu eyi-10 ukuya kwiintsuku ezimbalwa. Zonke iinombolo zefowuni zabelwana ngazo, nabani na unokubona imiyalezo engenayo. Ungasebenzisa iinombolo zefowuni zethutyana ze-intanethi zokuqinisekisa i-sms yeeakhawunti, ukufumana imiyalezo ebhaliweyo ngolwazi oluyimfihlo, ukubhalisa iiakhawunti kwimithombo eyahlukeneyo, ukufumana umbhalo kwi-sms, ukuqinisekisa iiakhawunti. Iinombolo zefowuni ezibonakalayo zifanelekile ukuba ufuna ukubhalisa i-akhawunti ngaphandle kwenombolo yefowuni yokwenyani kwaye ufuna ubumfihlo obongezelelweyo. Ezinye izizathu zokuzisebenzisa ziquka ishishini, iinjongo zenethiwekhi, kunye nokunxibelelana nabantu abatsha.
Ngelixa usebenza nge-intanethi-sms.org iinombolo ze-virtual nceda uqaphele, ukuba akuvumelekanga ukusebenzisa iinombolo zefowuni zokubhalisa kwiindawo zeenkqubo zentlawulo ye-elektroniki, imibutho yebhanki. Uninzi lwazo sele zivaliwe, ngoko ke umsebenzisi akazukwazi ukufumana imiyalezo esuka kwezi dilesi. Ukongezelela, ulawulo luya kunika naluphi na ulwazi oluyimfuneko kwii-arhente zokunyanzeliswa komthetho xa ziceliwe, ukuba zicela ulwazi malunga nomntu obandakanyekayo kuzo naziphi na izikimu ezingekho mthethweni.
Iinombolo zokuqinisekisa ngeselfowuni zinceda ukugcina ubumfihlo bakho.
Imfihlo yakho ibaluleke kakhulu. Ngeenombolo zethu zefowuni zexeshana, awuzukunikezela ngenombolo yakho yefowuni yokwenyani kwiiwebhusayithi ezifuna ukuqinisekiswa komyalezo obhaliweyo.
Oku kuya kukunceda ugcine ubuwena kwaye uphephe iifowuni ze-spam kunye nemiyalezo.
Sinikezela ngeenombolo zefowuni zomgunyathi simahla kunye nolwamkelo lomyalezo obhaliweyo okwi-intanethi nangaliphi na ixesha xa uzifuna. I-Online-sms.org isebenza nabaqhubi bemfonomfono, ngoko ke sinokongeza amanani amatsha e-sms yonke imihla.
Ukuvalwa kweNombolo kwi-Intanethi
Onke amanani anesihluzi esizenzekelayo esivimba imiyalezo efunyenwe kwiinkqubo zokuhlawula, imirhumo ehlawulwayo kunye namanye amaziko emali.
Ngaba ufuna inombolo yetem entsha? Yabelana ngesi siza kwaye usibhalele!
Fumana i-sms kwiinombolo zexeshana zokuqinisekisa::